Caabuqa Hargabka Cov-19 Qaabka u Unool karo iyo Meeluhu Galo ee laga qaado ama uu ku sifaafo.
Tuesday March 24, 2020 - 10:07:10 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Caabuqa Hargabka Cov-19 Qaabka u Unool karo iyo Meeluhu Galo ee laga qaado ama uu ku sifaafo. ICaabuqyada Hargabka neef mareenka (Coronaviruses) waxaa si fiican loogu yaqaanaa inay si gaar ah ugu adkeystaan ama ugu sii noolan karaan ​​marka loo eego halka ay ku noolaan karaan. Baarayaashana hadda waxay bilaabayaan inay fahmaan wax badan oo ku saabsan sida ay tani u sahleyso fiditaanka coronavirus-ka cusub.
Fayraska sababa Covid-19 ayaa loo maleynayaa marka uu kasoo baxo dadka ama xayawaanka qaba ee qufac ama hindhisa caabuqa inuu ku sii noolaan karo dusha sare ee meesha uu ku dhacdaan dhibcaha caabuqa ee qufaca ama hindhisada marka loo eego qalabka sida kartoonada, looxanta, biloofanada, balastiga, Maryha, iyo dharka aad xidhan tahay. (Neeltje van Doremalen), oo ku takhasusay cilmu-nafsiga ee Machadyada Caafimaadka Qaranka ee Mareykanka (NIH), iyo asxaabteeda ka shaqeysa Xarunta Dhakhaatiirta ee Rocky Mountain ee Hamilton Montana, waxay sameeyeen qaar ka mid ah tijaabooyinka ugu horreeya ee ilaa inta SARS-CoV-2 ay u socon karto wax ka duwan sagxadaha. Daraasaddooda, oo lagu daabacay joornaalka 'New England Journal of Medicine', waxay muujineysaa in fayrasku ku noolaan karo dhibco ahaan illaa seddex saacadood ka dib markii hawada la geliyay. Dhibcoyinka waxay u dhexeeyaan (1-5 micrometres) cabirkooda - qiyaastii 30 jeer ka yar yahay ballaca timaha aadanaha - waxay sii joogi karaan ama sii noolan karaan hawada dhowr saacadood.
Laakiin daraasadda (NIH) waxay ogaatay in fayraska SARS-CoV-2 uu sii noolaado saacado dheeri ah - illaa 24 saacadood - iyo illaa 2-3 maalmood oogada sare iyo biyaha korkooda Iyo wixi lamida.Natiijooyinka waxaay soo jeedinayaan in fayrasku muddo dheer ku sugnaado gacanta albaabadalagu furo, balaastiig ama shey ka samaysan balakoonno iyo meelaha kale ee adag. Baarayaasha waxay heleen, si kastaba ha noqotee, in dusha sare ee naxaasku ay u muuqatay inay disho fayraska muddo afar saacadood ah.Laakiin waxaa jira ikhtiyaar xawaare sare: cilmi baaris ayaa muujisay in coronaviruses-ka lagu dili karo daqiiqad gudaheed iyadoo lagu nadiifiyo sagxadaha 62-71% aalkolo ah, ama 0,5% aalkoonta hydrogen peroxide ama biliijka guriga oo ka kooban 0.1% sodium hypochlorite. Heerkul aad u sareeya iyo qoyaan ayaa sidoo kale u horseedaa inay keento coronaviruse-ka kale si dhakhso leh, inkasta oo cilmi-baaris la sameeyay ay muujisay in cudurka 'Coronavirus' ee sababa Sars lagu dili karo ama uu dili karo kulaylka heerkul ka sarreeya 56 ° C ama 132 ° F (taas oo kulaylkaasi uu sababi karo dhaawacyo).
"Waxaan qiyaasayaa sababtaas oo ah maareynta qalabka, waxay si deg deg ah u baabi'isaa oo laga yaabaa inay ku dhejiso fayraska," ayuu yidhi. Isbedelada heerkulka iyo qoyaanku sidoo kale saameyn ayey ku yeelan karaan inta ay noolaan karaan, sidaa darteedna waxaa laga yaabaa inay sharraxdo sababta ay ugu xasilloonayaan dhibco ka soo haray hawada, maaddaama ay aad u sii fidayaan. Waxa kale ooy sheegen cilmi baadheyaal ingiriis ahi, in isticmaalka badan ee telfoonkaga aad shidataa uu ku qaadsiin karo caabuqa farayska, waayo waxa laga yaaba adoo meel faraysku ku jiro taabtay sida tusaale jaranjar (stairs) aad fuulaysay, wiish( elevator, lift), tareen, Bus, miis, kursi iyo wixii la mid ah inaad taabato kadib adoon faraha iska dhaqin/maydhin aad kolba telfoonkaga taatabato adoo fariin ka diraya ama Social media yaha kolba eegaya, ama aad ku hadasho ood dhabankaaga iyo dhagtaada saarto kadib xanuunki sidaas isugu gudbisid. Hadaba muhiimado waa inaad ka taxadirtaa kuna waanisaa caruurta, ehelka iyo bulshadaba inay markasta gacmaha iska dhaqaan iyo meelaha la wada isticmaalo telfoonkadana marwalba waaybiska alkoloda leh isaga nadiifiyaan kuna eekadaan guryahooda iskana jiraan meelaha bulshadu isugu timaado. Waxa kale oo baadheyaasha caafimaadku sheegen in wiiga ugu horeeya ama dhawrka cisho ee ugu horeeya ee qofku qaado xanuunka aan laga garanayn lagana dareemayn oo xitaa qalabka caafimadka ee lagu baadhaa sheegi karayn istajka ugu horeeya ee caabuqa iyo istajka ugu danbeeya ee caabuqaba ayna tahay qoku haduu iska shakiyo inuu gurigiisa isku karintimeeyo ilaa ay wax ukala cadanayaan haduu xanuunu ama astaamo la xidhiidha caabuqa isku arkana la xidhiidho bahda caafimaadka sida ugu dhakhsaha badan. Waxaana jirta in siyaabo badan caabuqa farayska lagu kala qaado, waana suurto gal in fayrasku ku sii jirayo ama noolanayo mudo dheer meelahas aan kor kusoo sheegay sida baadheyaasha caafimadku sheegen, waxaasna waxa ka adag nadaafada gacamaha sagxadaha iyo wixii la mid ah si joogto ah, ilaahayna ha inaga badbaadiyee. Allah mahad leh.
Abdi Rahim Ibrahim Ahmed (boodhari) email[email protected].